राष्ट्रिय योग दिवस सप्ताहव्यापी, योगाभ्यास नसर्ने रोगबाट बच्ने सर्वोत्तम विधि – Health Post Nepal
राष्ट्रिय योग दिवस सप्ताहव्यापी, योगाभ्यास नसर्ने रोगबाट बच्ने सर्वोत्तम विधि
२०७५ माघ १ गते १७:२९
‘शान्ति र समद्धिका लागि योग’ भन्ने मूल नारासहित मंगलबार चौथो राष्ट्रिय योग दिवस–२०७५ मनाइएको छ । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको प्रांगणसहित ७७ वटै जिल्ला तथा आयुर्वेदसम्बद्ध सबै संस्थाहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइएको हो ।
स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त रहनका लागि योग अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ । पछिल्लो समय अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव चुलिँदो छ । पूर्वीय दर्शनद्वारा व्यवस्थित तथा ऋषि–महर्षिहरूद्वारा सिद्ध योगको बहुआयामिक महत्वबोध गर्दै पछिल्लो समय विश्वभरि नै योग दिवस मनाउने गरिएको छ ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले विभिन्न योगाभ्यास गरे । कार्यक्रममा योगगुरु राजकुमार कार्कीले विभिन्न योगासन तथा प्राणायम गराएका थिए ।
कार्यक्रममा आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरअन्तर्गत नेपाल आयुर्वेद विद्यार्थी समाजद्वारा आयोजित राष्ट्रिय योग दिवस २०७५ का अवसरमा योगसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नारा लेखन प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो हुने विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले पुुुरस्कार वितरण गरेका थिए । राज्यमन्त्री यादवले स्वस्थ रहनका लागि योग अत्यन्त उपयोगी भएको बताए । ‘योगाभ्यासले शरीरका सम्पूर्ण मांसपेशीमा निकै फाइदा पुर्याउँछ,’ उनले भने, ‘शरीरमा भएको ८० प्रतिशत ब्लकेजलाई योगाभ्यासले निकै फाइदा पुर्याउँछ भने नसर्ने रोगको रोकथामको एक मात्र उपाय योग गर्नु नै हो ।’
हाल विश्वभर कुल बिरामीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नसर्ने रोगबाट ग्रस्त छन् । नसर्ने किसिमका रोगमध्ये पनि मानसिक समस्या, मोटोपनसम्बन्धी समस्याले आधा हिस्सा ओगट्छ । यस्ता समस्याबाट बच्न योग तथा अन्य शारीरिक व्यायाम अपरिहार्य छन् ।
कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले स्वास्थ्यबारे जनचेतना तथा जागरण फैलाउन डेमो देखाउने उद्देश्यले योग दिवस मनाइएको बताए । अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव हटाउन तथा नसर्ने रोगको निराकरणमा समेत योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आयुर्वेद चिकित्सक डा. बाबुराज अमात्यले जानकारी दिए ।
चौथो राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा योगका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहेको मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो । माघ १ देखि ७ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइने भएको छ । वि.सं. २०३६ देखि नै सूर्यको उत्तरायण सुरु हुने दिन पारेर नेपालमा डा. हरिप्रसाद पोखरेलको सक्रियतामा योगको क्षेत्रमा काम गर्नेे संस्थाहरूको सहभागितामा योग दिवस मनाउन थालिएको थियो । यद्यपि, सरकारले भने ४ वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । ज्योतिषशास्त्रअनुसार १ माघदेखि उत्तरायण सुरु हुन्छ ।
योग र आयुर्वेदको उत्पत्ति मानिसको उत्पत्तिसँगै भएको मानिन्छ । योग मनोविज्ञानको उच्चतम प्राप्ति हो । आधुनिक मनोविज्ञान शरीर र मनसम्म मात्र सीमित छ भने वैज्ञानिक यौगिक मनोविज्ञानले मानिसको उच्चतम चेतनासम्मको अन्वेषण र खोज गरिरहेको हुन्छ । शरीर स्थिर राख्ने अभ्यासले मनको चञ्चलता हटेर जान्छ, स्थिर मन नै योगीमन हो, जहाँ आनन्दको अनुभूति गर्न सकिन्छ, जसका कारण सकारात्मक सोचको विकास हुनुका साथै मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त बन्न सकिन्छ ।
एकाग्र मनलाई जुनसुकै सिर्जनशील कार्यमा लगाएर सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । योग विभिन्न किसिमका रोगको उपचारमा सहयोगी विज्ञानको रूपमा पनि स्थापित छ । तर, योगको प्रयोग रोगोपचारभन्दा पनि स्वास्थ्यप्रवर्धनमा गर्नु उचित हुन्छ । आयुर्वेदका विभिन्न ग्रन्थमा योगको व्याख्या गरेको पाइए पनि योग आयुर्वेदको समानान्तर विज्ञानका रूपमा विकास भएको पाइन्छ ।
योग गर्न चाहनेले प्रारम्भिक अवस्थामा कुशल योग प्रशिक्षकको सहायतामा विभिन्न योगासन सिक्नु जरुरी हुन्छ । कहीँ–कतै योगको गलत प्रयोग भएको भए त्यसलाई यथाशक्य छिटो सुधार्नु आवश्यक छ । दीर्घरोगीले कुनै औषधि लिएको भए चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम चल्नु आवश्यक हुन्छ । दैनिक नियमपूर्वक योग गरेमा स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती प्राप्त हुने कुरालाई परापूर्वकालदेखि नै सिद्ध मानिन्छ ।
राष्ट्रिय योग दिवस
दोस्रो पटक चिया तताएर पिउनु के हानिकारक हुन्छ?
कुन समयमा दूध पिउँदा कस्तो फाइदा?
पसिना धेरै आउँछ ? यस्तो समस्या भएको हुन सक्छ
रुँदा शरीरलाई मिल्छ यस्ता नौ फाइदा